လူနာတင် ယာဉ် ကိုတောင် ဦးစား မပေး တဲ့ အသိ တရား ခေါင်းပါး သူများ – Cele Posts
လူနာတင် ယာဉ် ကိုတောင် ဦးစား မပေး တဲ့ အသိ တရား ခေါင်းပါး သူများ
ဖြစ်စဉ် ၂ ရပ်လုံး ကျွန်တော် တို့ကား ပေါ်မှာ.အောက်ဆီဂျင် ပေး.ခေါ်ရတဲ့ အရမ်းအရေးကြီး လူနာ တွေ ဆေးရုံပို့ရတဲ့ အချိန်..မီးစုံဖွင့် အလန်း အော်တယ်.. မောင်းတဲ့ ကလေး တွေက အသက်ကယ် ဖို့ဘဲ စိတ်ထဲထည့် ထားတယ်.. ဆေးရုံမြန်မြန်ရောက် ဖို့အရေးကြီး တယ်ပေါ့.. မီးပွိင့်မီးနီ ဖြတ်မိ တယ် ဒါပေမဲ့ ၂ ကြိမ်လုံး တဖက် ယာဉ်ကြောက ကားတွေ နဲနဲလေးမှ အခွင့်အရေး မပေးခဲ့ပါဘူး ဦးစားလဲ မပေးပါဘူး..ပုံပါအတိုင်း ဝင်တိုက် တာ ခံရပါတယ်..
ကား ၂ စီး တရက်စီ ၁၁ ရက်နေ့နဲ့ ၁၈ ရက်နေ့က ပါ.. ကျွန်တော်တို့ လျော်ပေးခဲ့ ရပါတယ်..ကိုယ့်ကား ကိုလည်း မြင်တဲ့ အတိုင်း ဘေးတံခါး တွေနဲ့ အရှေ့ခေါင်း တွေကို ပြင်ရပါတော့မယ်..ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေကို မှာထား လိုက်ပါပြီ..ဘယ်လောက် အရေးကြီးကြီး.မီးနီ ကို မဖြတ်ပါနဲ့ တော့လို့..ဒီဖြစ်စဉ် ၂ ရပ်လုံးမှာ..လူနာအသက် ကယ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက် တွေလဲ ပေးဆပ်လိုက်ရနိုင်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့..ကျွန်တော်တို့ မီးနီကို မဖြတ်ရဲတော့ပါဘူး..
တာမွေကွန်ယက် SRT (yro) သတင်းနဲ့ ရန်ပုံငွေရှာ ဖွေရေး တာဝန်ခံ Ph..09 25000 1377
လူနာတငျ ယာဉျ ကိုတောငျ ဦးစား မပေး တဲ့ အသိ တရား ခေါငျးပါး သူမြား
ဖွဈစဉျ ၂ ရပျလုံး ကြှနျတျော တို့ကား ပျေါမှာ.အောကျဆီဂငျြ ပေး.ချေါရတဲ့ အရမျးအရေးကွီး လူနာ တှေ ဆေးရုံပို့ရတဲ့ အခြိနျ..မီးစုံဖှငျ့ အလနျး အျောတယျ.. မောငျးတဲ့ ကလေး တှကေ အသကျကယျ ဖို့ဘဲ စိတျထဲထညျ့ ထားတယျ.. ဆေးရုံမွနျမွနျရောကျ ဖို့အရေးကွီး တယျပေါ့.. မီးပှိငျ့မီးနီ ဖွတျမိ တယျ ဒါပမေဲ့ ၂ ကွိမျလုံး တဖကျ ယာဉျကွောက ကားတှေ နဲနဲလေးမှ အခှငျ့အရေး မပေးခဲ့ပါဘူး ဦးစားလဲ မပေးပါဘူး..ပုံပါအတိုငျး ဝငျတိုကျ တာ ခံရပါတယျ..
ကား ၂ စီး တရကျစီ ၁၁ ရကျနနေဲ့ ၁၈ ရကျနကေ့ ပါ.. ကြှနျတျောတို့ လြျောပေးခဲ့ ရပါတယျ..ကိုယျ့ကား ကိုလညျး မွငျတဲ့ အတိုငျး ဘေးတံခါး တှနေဲ့ အရှခေ့ေါငျး တှကေို ပွငျရပါတော့မယျ..ကြှနျတျောတို့ ကလေးတှကေို မှာထား လိုကျပါပွီ..ဘယျလောကျ အရေးကွီးကွီး.မီးနီ ကို မဖွတျပါနဲ့ တော့လို့..ဒီဖွဈစဉျ ၂ ရပျလုံးမှာ..လူနာအသကျ ကယျရငျးနဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့အသကျ တှလေဲ ပေးဆပျလိုကျရနိုငျပါတယျ. ဟုတျကဲ့..ကြှနျတျောတို့ မီးနီကို မဖွတျရဲတော့ပါဘူး..
တာမှကှေနျယကျ SRT (yro) သတငျးနဲ့ ရနျပုံငှရှော ဖှရေေး တာဝနျခံ Ph..09 25000 1377
အက အရမ်း ဝါသနာ ပါ တာကြောင့် တိုင်ကို ပတ်ပြီး ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ အကြမ်း စား ကပြ လိုက် တဲ့ နဝရတ် ရဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်
ကာလ ကပ်ဘေး ရောဂါ များ ကို ရှေးတုန်းက ဤသို့ ကာ ကွယ် ခဲ့ကြ သည်